Essential ဖုန်းတွေမှာ Oreo beta3update ရောက်ရှိနေပြီနော်.. – AsiaApps
January 18, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Essential ဖုန်းတွေမှာ Oreo beta3update ရောက်ရှိနေပြီနော်..
Essential ဖုန်းတွေမှာ Oreo beta3update ရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ကို လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ Essential ရဲ့ Twitter post တစ်ခုကနေသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Oreo beta3update ရဲ့ File Size ကတော့ 106.5 MB ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုထွက်ရှိထားတဲ့ Oreo beta3update မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ feature တွေနဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့ အောက်ပါပုံထဲကအတိုင်းပါပဲ။ Download ကိုတော့ Essential ရဲ့ Offical Developer Official Website ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
Oreo Beta3now available! from essential
Oreo ကတော့ Android ရဲ့နောက်ဆုံး version ပါ။ Essential ဟာ Oreo update ကို Beta အဆင့်နဲ့ဖြန့်တာ အခုဆိုရင် Beta3အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Beta update တစ်ခုထွက်တိုင်း feature အသစ်တွေ၊ Bug တွေကို ပြင်ဆင်မှုတွေ တိုးမြှင့်လာပါတယ်။
အခု ထွက်ရှိထားတဲ့ Oreo beta3update မှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ Oreo beta2update နဲ့ကွဲပြားနေတဲ့ ပြင်ဆင်မှုနှစ်ခုကို တွေ့ရမှာပါ။ ပထမတစ်ခု ကတော့ ဇန်နဝါရီ Security patch ဖြစ်သွားပြီး Spectre နဲ့ Meltdown ပြဿနာတွေ ပြင်ဆင်ထားမှုပါ။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ဖုန်းကို Stable ဖြစ်အောင် Bug တွေကိုပြင်ဆင်ထားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Beta2update တုန်းကလွတ်သွားတဲ့ အရာတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် Security အပိုင်းကတော့ တော်တော်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ ရမှာပါ။
We’re getting close to the full release. We’ll share an update on timing as soon as possible.
Android Oreo အတွက် Beta version တွေပဲထွက်ရှိထားတဲ့ Essential ဟာ အခုထွက်ရှိထားတဲ့ Oreo Update Beta3update ပြီးရင်တော့ Oreo Stable Version ထွက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်ဖော်ပြထားတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အပေါ်က Essential ရဲ့ Tweet ကို ကြည့်ပြီးခန့်မှန်းပြောလိုက်တာပါ။ Oreo beta3update မှာလည်း security အပိုင်းကတော်တော်စိတ်ချနေရပြီဖြစ်တာကြောင့် မကြာခင်မှာပဲ Android Oreo stable version ကိုကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android, Essential, Firmware Updates
MWC (2018) အတွက်အလန်းစားဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ HMD!